कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न निजी अस्पताललाई एकातिर बेडको समस्या, अर्कातिर सरकारले तोकेको शुल्क :: विवेक राई :: Setopati
निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिनका महासचिव हेमराज दाहाल भन्छन्, '२० प्रतिशत बेड छु्ट्याउन समस्या होइन। कति अस्पतालले छुट्याएका पनि छन्। तर कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई एकै ठाउँमा उपचार गर्दा जोखिम हुन्छ। अन्य व्यक्तिलाई संक्रमित किन बनाउने?'
'हामीले उपत्यकामा सय आइसियू र ३० वटा भेन्टिलेटरसहित एक हजार बेडको कोभिड अस्पताल बनाउन प्रस्ताव गरेका छौं। त्यसमा निजी अस्पतालले पनि सहयोग गर्ने भन्ने हो। अब त्यसको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ,' दाहलले भने, 'त्यो भयो भने संक्रमितहरूको कोभिड अस्पतालमा उपचार हुन्छ र ननकोभिड बिरामीले अन्य अस्पतालबाट सेवा पाउँछन्।'
उनले त्यसरी कोभिड अस्पताल बनाउनलाई केही अस्पताल विकल्पमा रहेको बताए। 'जनमैत्रीमा ३ सय बेड खाली छ, सर्वाङ्गमा ५० बेड खाली छ। सरकारले त्यसका लागि चासो दिनुपर्‍यो नि,' उनले भने।
'एकै ठाउँमा उपचार गर्दा संक्रमितको संख्या बढ्छ। कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई छुट्टै राखे पनि सिटी स्क्यान र एमआरआइ गर्नुपर्‍यो भने एकै ठाउँमा लैजानु पर्छ,' अस्पतालका प्रबन्धक विजय रिमालले भने, 'त्यसैले मेडिसिटी ननकोभिड अस्पताल नै रहन्छ।'
'हामी संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै ५० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्छौं। त्यो दुई-चार दिनमै तयार हुन्छ,' उनले भने।
संक्रमितको उपचार खर्च भने सम्बन्धित व्यक्तिबाटै लिइएको भन्दै निर्देशक पाण्डेले भने, 'हामी सस्तोमा उपचार गर्न सक्दैनौं। कर्मचारी, उपचार खर्च नै महंगो पर्छ। एउटा भेन्टिलेटरमा दुई जनासम्म स्टाफ खटाउनु पर्छ। त्यसैले सरकारले तोकेको शुल्कले धान्नै सक्दैन।'
उनले भने, 'अहिले पनि सुमेरूले ३२ जनाको उपचार गरिरहेको छ। अल्का, नर्भिकले गरिहरेको छ। त्यसैले हामी संक्रमितको उपचार गर्दैनौं भन्ने हैन तर सरकारले कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई छुट्टै राखेर उपाचर गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। त्यसमा हामीले सघाउने भनेका छौं।'
'सोल्टी होटलले ५ सयमै खाना खुवाउँछ भने त सबै मान्छे सोल्टी नै भात खान जान्छन् नि। त्यसैले सरकारले त्यस्तो गर्नुभएन। कम्तिमा अस्पतालले दिने सेवा र अन्य कुरालाई ख्याल गरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्‍यो,' दाहालले भने।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले भने, 'यहाँ त कोभिड भएको थाहा हुनेबित्तिकै भेन्टिलेटरमा भएका बिरामीलाई पनि झिकेर अन्यत्र पठाउने गरियो। त्यसैले त्यस्तो नहोस् भनेर संक्रमितको उपचार अस्पतालले नै गर्नुपर्छ भनेर बेड छु्ट्याउन भनिएको हो।'
व्यवस्थापनको पक्षमा भने निजी अस्पतालहरूसँग कुरा भइरहेको भन्दै अधिकारीले भने, 'दुई तीन वटा अस्पतालहरूले मिलेर कोभिड अस्पताल दिने भनेर प्रस्ताव पनि गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौं। तर उपचार नै गर्दिनँ त भन्न पाइएन नि।'
'केही अस्पतालहरूले चर्को शुल्क लिएको भन्ने प्रतिवेदन पनि आएको छ। त्यसलाई हेरेर मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्छ,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १२, २०७७, ११:४४:००